DAAWO: Wafdigii DFS ee kuguuldareystay Wada hadalkii Boosaso oo hadda dib ugu laabanaya Muqdisho.
BOOSAASO(P-TIMES) – Wasiiro katirsan Xukuumadda Soomaaliya oo dhamaantood kasoo jeeda Puntland, shalayna u yimi sidii ay wada hadal ula yeelan lahaayeen Madaxweynaha Puntland ayna uga baajiyaan safarkiisa Kismaayo ayaa ku guuldareystay arrintaasi, waxayna goor dhaw dib ugu laaban doonaan magaalada Muqdisho.
Warar hoose ayaa sheegaya in wafdigan kahor intii aysan bixin ay kulan gaar ah la yeesheen qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka ee gobalka Barri oo ay kala hadlayaan tabashooyinkooda ay muujinayeen maalmihii u dambeeyey.
Xukuumada Puntland ayaa u aragta kulamadan faragalin siyaasadeed oo waqtigan dhacda, waxaana wararku sheegayaan in ay ka carootay oo lagu amray in aysan cidna qabili karin.
HALKAAN KA DAAWO FALANQEYN CUSUB
Wasiiraddan heer federal oo kasoo jeeda Puntland ayaa marka ay dib ugu laabtaan Muqdisho, la kulmi doona madaxweynaha Soomaaliya Max`ed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu lahaa dalabka ah in ay tagaan Boosaaso.
Majiraan wax guul ah oo ay xubnahan la tagayaan Muqdisho, waxaana taasi bedelkeeda ay xooga saareen sidii Madaxweynaha Puntland looga baajin lahaa safarkiisa magaalada Kismaayo ee Jubbaland.